အရေပြားပြောင်းလဲမှုများအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးများ - Hello Sayarwon
သင့်အရေပြားဟာ အချိန်တိုင်း တသမတ်တည်း ရှိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ အပျိုဖော် လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ ဝက်ခြံ၊ ဓါတ်မတည့်မှု စတဲ့ အခြေအနေ အချိန်အခါ အမျိုးမျိုးကြောင့် အရေပြားပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ အရေပြားပြောင်းလဲမှု အများစုက ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်သလို သင့်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသရွေ့ ကုသမှုခံယူဖို့ လိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ ကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၁။ အရေပြားကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ
သင့်အရေပြားကို သန့်စင်စေဖို့ ရေနွေး၊ အပျော့စား ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် သန့်စင်ဆေးရည်များ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အတွက် မတူညီတဲ့ သန့်စင်ပစ္စည်းတွေ ခွဲခြားအသုံးပြုဖို့ လိုကောင်းလိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာသန့်စင်ရာမှ အတင်းပွတ်တိုက်ပစ်တာမျိုး မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ အရေပြားကို သန့်စင်ပေးခြင်းအားဖြင့် အဆီပိုများ၊ ဆဲလ်သေများနဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ အမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အရေပြားထိခိုက်စေမည့် အပြုအမူများကို ရှောင်ပါ
အရေပြားပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နေတဲ့နေရာတဝိုက်ကို လက်နဲ့ဆွခြင်း၊ ညှစ်ခြင်း၊ ကုတ်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဝက်ခြံနဲ့ အခြားအဖုအပိမ့်တွေကို မိမိဘာသာ ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းကြောင့် အရေပြားပိုးဝင်နိုင်တဲ့အတွက် ၎င်းအပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားနဲ့ အရေပြားပွတ်တိုက်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချဖို့ ပွပွချောင်ချောင် အဝတ်အစားများကိုသာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အချို့အခြေအနေတွေမှာ အရေပြားပြောင်းလဲမှုဖြစ်နေတဲ့ နေရာပေါ် ပတ်တီးစည်းပြီး ဖုံးအုပ်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမွှေးနံ့ပါဝင်တဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေး၊ ရေမွှေး၊ အဝတ်လျှော်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ fabric softenerနဲ့ မျက်နှာလိမ်းအလှကုန်တွေဟာ အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် အမွှေးနံ့မပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ရေကူးပြီးတိုင်း ရေပြန်ချိုးပါ
ရေကူးကန်မှာ ရေကူးပြီးတိုင်း ရေနွေးနဲ့ ရေပြန်ချိုးပါ။ ရေကူးကန်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကလိုရင်း၊ ဆားနဲ့ ပိုးမွှားတွေဟာ သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ အာဟာရရှိမယ့် အစားအသောက်များကို စားသုံးပါ
အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ပိုမိုစားသုံးပါ။ အသားအရေစိုပြေစေရန် ရေများများသောက်ပါ။
၅။ အရေပြားကို ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးပါ
သင့်အရေပြားကို အမြဲ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် အစက်အပြောက်တွေ နဂိုထက်ပိုပြီး ညိုမဲလာခြင်း၊ အဖုအပိမ့်ထွက်ခြင်း စတဲ့အခြေအနေတွေကို ချက်ချင်း သတိပြုမိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ မွေးရာပါအမှတ်အသားများကို ဖုံးကွယ်ထားပါ
မွေးရာပါအမှတ်အသားကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်သူတွေအနေနဲ့ ဒီအချက်ကို ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ အသုံးပြုပြီး ဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိဘာသာ ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဟာ သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်တဲ့ အခြေအနေတွေကတော့
သွေးထွက်ခြင်း၊ ပုံမမှန်သည့် အရည်များထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်ရှိ အဖုအပိမ့် အစက်အပြောက်များ အရောင်၊ အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း
အိမ်တွင်းကုထုံးတွေဟာ အချို့သော အရေပြားပြောင်းလဲမှုများကို သက်သာစေနိုင်ပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာတော့ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေနဲ့မှ အရေပြားပြဿနာ မသက်သာရင် ဒါမှမဟုတ် သွေးထွက်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Skin Changes – Home Treatment. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/tc/skin-changes-home-treatment. Accessed March 8, 2017.
Skin Changes – Topic Overview. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/tc/skin-changes-topic-overview#1. Accessed March 8, 2017.
Acne – When To CallaDoctor. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acne/acne-vulgaris-when-to-call-a-doctor. Accessed March 8, 2017.